Ndịàmà Jehova n’Eshia
Izrel: Ebe ụmụnna anyị ji obere kọmputa na-ezi mmadụ ozi ọma Alaeze Chineke
MBA OLE DỊ NA YA 49
MMADỤ OLE BI NA HA 4,409,131,383
NDỊ NKWUSA OLE NỌ NA HA 718,716
MMADỤ OLE A MỤỤRỤ BAỊBỤL 766,364
Otu Narị Awa Maka Otu Narị Afọ
N’otu mba dị́ n’Eshia, otu nwaanyị a ma ama na-eme fim, bụ́ onye a na-ejikwa egosi uwe kweere ka a mụwara ya Baịbụl. O bidoro ime ihe a na-akụziri ya ozugbo, tụfuokwa akwụkwọ mgbaasị ya na ihe oyiyi dị iche iche ọ na-eji ekpe okpukpe Buda.
Otu n’ime ndị enyi ya nwaanyị rịọrọ ya, sị: “Kwụsị ịmụ Baịbụl ruo afọ atọ ma lekwasị anya n’ọrụ gị. Afọ atọ ahụ gachaa, gị amụwakwa Baịbụl.”
Nwaanyị ahụ sịrị ya: “Kemgbe afọ iri abụọ na anọ, m nọ na-achọ ịmụ banyere Jehova. Ugbu a m mụwara banyere ya, gịnị mere m ga-eji kwụsị ruo afọ atọ ọzọ?”
N’izu ọ ga-eme ihe omume mbụ ya n’Ụlọ Akwụkwọ Ije Ozi Ọchịchị Chineke, otu ụlọ ọrụ na-eme fim kpọtụụrụ ya. Ha gwara ya ka ọ rụwara ha ọrụ ruo afọ anọ. Ha ga-akwụkwa ya ezigbo ụgwọ. Ọrụ ahụ bụ ịna-eme ihe ọ bụla ha chọrọ ka o mee na fim ọ bụla ha chọrọ iwepụta. O kweghị anara ọrụ ahụ. N’ọnwa Mee afọ 2014, ọ ghọrọ onye nkwusa a na-emebeghị baptizim. Mgbe ọnwa Ọgọst ruwere, o kpebiri na ya ga-arụta otu narị awa n’ọnwa Ọgọst. Mgbe a jụrụ ya ihe mere o ji mee mkpebi ahụ, ọ sịrị: “Achọrọ m ịrụta otu narị awa n’ozi ọma iji cheta otu narị afọ Jizọs chịrịla. Otu awa bụ maka otu afọ.” O mere ihe a o kwuru. N’ọnwa Jenụwarị afọ 2015, e mere ya baptizim, ọ bụkwa ọsụ ụzọ inyeaka ugbu a.
Ha Ji Abalị Ha Nọrọ n’Ụlọ Nga Mee Ihe Bara Uru
Na Siri Lanka, ụmụnna nwaanyị anọ banyere bọs gaa izi ozi ọma n’ebe a na-enweghị onye na-ezi ozi ọma. Ọtụtụ ndị bí ebe ahụ na-ekpe okpukpe Buda. N’ụbọchị nke abụọ ha kwusara ozi ọma ebe ahụ, otu onye mọnk na onye tagzi kwụsịrị ha kparịwa ha. Tupu a mara ihe na-emenụ, ihe dị ka mmadụ iri atọ iwe ji agbaala ha gburugburu. Ndị uwe ojii bịara ebe ahụ nwụrụ ụmụnna nwaanyị ahụ gaa n’ụlọ ọrụ ha. Ha kpọchiri ha ebe ahụ chi abọọ n’agbanyeghị na e nweghị ihe e kwuru na ha mere. Ha kpọchiri ha n’ebe ha kpọchiri ndị omekome. Ndị omekome ahụ jikwa okwu ọjọọ na okwu rụrụ arụ saa ha ahụ́. N’agbanyeghị nke ahụ, ha ji ohere ahụ ha nọ n’ụlọ mkpọrọ zie ha ozi ọma. Otu n’ime ha sịrị: “A kpọchiri mụ na ndị gburu mmadụ, ma m ziri ha ozi ọma. O juru ha anya na a kpọtara m ebe ahụ. Ha jụkwara m ọtụtụ ajụjụ gbasara ihe ndị m kweere. Otu n’ime ha jụdịrị m, sị, ‘Gịnị mere obi ji bụrụ gị sọ aṅụrị?’”
Siri Lanka: Ụmụnna nwaanyị anọ ndị a ji bọs gaa izi ozi ọma n’ebe a na-enweghị onye na-ezi ozi ọma
Ụlọikpe Kacha Elu na Siri Lanka ekwetala ileba anya n’akwụkwọ anyị gbara ndị uwe ojii maka ịkpọchi ụmụnna anyị n’enweghị ihe ha kwuru ha mere. Ma, ha elebabeghị okwu ahụ anya.
Otú E Si Nyere Otu Nwaanyị Na-anaghị Ebili Ọtọ Aka
Na Japan, otu nwanna nwaanyị bụ́ ọsụ ụzọ oge niile aha ya bụ Michiko na-eji asụsụ ndị ogbi amụrụ otu nwaanyị mere agadi nọ n’ụlọ ọgwụ ihe. Nwanna nwaanyị a jụrụ otu n’ime ndị na-arụ ọrụ n’ụlọ ọgwụ ahụ ma ò nwere ndị ọrịa ọzọ o nwere ike ịmụrụ ihe. Michiko gakwuziiri Kazumi zie ya ozi ọma. Kazumi anaghị ekwu okwu, ma ọ na-anụ ihe. Kemgbe o nwere ihe mberede ụgbọala n’oge ọ dị afọ iri abụọ na atọ, ọ naghịzi ebili ọtọ. Ọ naghịkwa ejili ọnụ ya eri nri ma ọ bụ ṅụọ mmiri. Ọ jụrụ Michiko ọtụtụ ajụjụ, kwetakwa ka ya na ya na-amụ Baịbụl.
Japan: Ebe Kazumi na-ede akwụkwọ ozi o ji na-agba ndị mmadụ ume
Otú ha si amụ ihe bụ, Michiko jụọ Kazumi ajụjụ, Kazumi atụọrọ ya azịza ya aka, ma ọ bụkwanụ ya edepụta ya edepụta. Mgbe Kazumi nwetara ekwentị, ya na Michiko malitere iji ya na-agụ ihe mmụta dịịrị ụbọchị n’ụtụtụ ọ bụla. N’agbanyeghị na ọ naghị ebili ọtọ, ọmụmụ ihe ya nọgidere na-aga n’ihu nke na o kwuru na ya chọrọ ịbụ Onyeàmà Jehova. Mgbe Kazumi gbara afọ iri isii na otu, ọ ghọrọ onye nkwusa a na-emebeghị baptizim. N’oge ahụ, ọ mụọla ihe afọ iri na atọ.
Ebe ọ bụ na Kazumi anaghị ebili ọtọ, ọgbakọ haziri ka ọ na-esi n’ekwentị ege ihe a na-amụ n’ọmụmụ ihe na ihe a na-ekwu ná mgbakọ. A bịa ọmụmụ ihe, ụmụnna nwaanyị dị iche iche na-agụpụta azịza nke ajụjụ ndị Kazumi chọrọ ịza.
Kazumi na-edegara onye ọ bụla a na-amụrụ Baịbụl na-abịa ọmụmụ ihe akwụkwọ ozi ga-agba ya ume. Ọ na-ezikwa ndị na-arụ ọrụ n’ụlọ ọgwụ na ndị bịara ileta ya ozi ọma. Kazumi na-agwa ha, sị, “Unu mụọ Baịbụl, unu ga-enwe obi ụtọ.”
Onye Mọnk Abịawa Ọmụmụ Ihe
N’otu mba dị́ n’ebe ndịda ọwụwa anyanwụ Eshia, otu nwanna nwaanyị hụrụ onye mọnk mgbe ọ gara ịhụ dọkịta anya n’ụlọ ọgwụ. Nwanna nwaanyị a jụrụ ya, sị, “Ị̀ ga-achọ ibi n’ebe mara mma ruo mgbe ebighị ebi n’arịaghị ọrịa?” Ha kwurịtara okwu nke ọma. Nwanna nwaanyị a nyekwara ya broshọ bụ́ Gee Chineke Ntị, onye mọnk ahụ enye ya nọmba ekwentị ya. Nwanna nwaanyị a nyere otu nwanna nwoke nọ n’ọgbakọ ha nọmba ahụ. Obere oge, nwanna nwoke ahụ kpọrọ onye mọnk ahụ n’ekwentị ma gwa ya ka ọ bịa gere okwu pụrụ iche a ga-ekwu n’ọmụmụ ihe. Mgbe ọ bịara, ihe ọ nụrụ tọrọ ya ụtọ, nke ka nke, abụ anyị. Obi tọkwara ya ụtọ otú onye ọ bụla si kelee ya.
Mgbe onye mọnk ahụ jụrụ otu nwanna nwoke ma ànyị nwere mahadum ma ọ bụ seminarị nke anyị, nwanna ahụ gwara ya na anyị na-amụrụ ndị mmadụ Baịbụl. Ọ gwakwara ya ka ha mụwa Baịbụl. Tupu nwanna ahụ abịa n’izu ọzọ, onye mọnk ahụ akwadochaala isi nke mbụ n’akwụkwọ Gịnị n’Ezie Ka Bible Na-akụzi? Ọmụmụ ihe ya na-aga n’ihu, o bidokwara ịbịa ọmụmụ ihe, na-azakwa ajụjụ n’Ọmụmụ Ihe Ụlọ Nche.
Mgbe onye mọnk ahụ gara mgbakọ sekit anyị, onye na-anọchite anya alaka ụlọ ọrụ anyị gwara ya ka ọ bịa legharịa anya na Betel. N’izu ọzọ, onye mọnk ahụ gbara n’ụzọ awa iri tupu ya eruo Betel. Mgbe o rutere, a nabatara ya nke ọma. Ná ngwụcha ọnwa Febụwarị afọ 2015, ọ kwụsịrị ịbụ onye mọnk. Ọ ka na-amụ Baịbụl, na-azakwa ajụjụ n’ọmụmụ ihe.
O Furu, Mana A Chọtara Ya
N’oge na-adịbeghị anya, e zigara ndị ọsụ ụzọ n’ebe ugwu India ka ha gaa kwusaa ozi ọma. E kwusabeghị ozi ọma ebe ahụ kemgbe ọtụtụ afọ. Ọtụtụ ndị nwere mmasị n’ozi ọma ha ziri ha. Nke a mere ka ha chọwa ebe dị mma ha ga-anọ na-enwe ọmụmụ ihe. Mgbe ha na-aga ịmụrụ mmadụ ihe, ha hụrụ ụlọ a ka na-arụ arụ, ya agbata ha n’obi ka ha gaa okwu ya. Ha laghachiri banye ebe ahụ. Mgbe ha ruru n’azụ ụlọ ahụ, ha hụrụ otu agadi nwaanyị ma gwa ya na ha bụ Ndịàmà Jehova. Ọ mụmụrụ ọnụ ọchị ma gwa ha na ya bụkwa Onyeàmà Jehova. Ọ nabatakwara ha nke ọma n’ụlọ ya ma gosi ha akwụkwọ anyị ndị o nwetara kemgbe ihe dị ka afọ 1971 ruo afọ 1989. Ya na ndị ọsụ ụzọ amụọla ihe afọ iri atọ gara aga tupu ụmụnna ndị a abịa. Ọ gaakwala ọmụmụ ihe anyị ụfọdụ n’agbanyeghị na di ya ekweghị ya gaa. Obi siri ya ike na ya ahụla ndị na-akụzi eziokwu. Ma, mgbe ndị ọsụ ụzọ ahụ lara, ọ kwụsịrị ịga ọmụmụ ihe. Ụmụ ya niile bara chọọchị dị iche iche, ma, ọ jụrụ ịba chọọchị ọ bụla.
India: Ebe otu nwaanyị nwere mmasị na-egosi ụmụnna anyị akwụkwọ ndị o nwetara n’ihe dị ka afọ 1971 na afọ 1989
N’oge na-adịbeghị anya, ụmụ ya bidoro inye ya nsogbu ka o debanye aha ya na chọọchị Katọlik ka ha nwee ike ili ya ma ọ nwụọ. Nwanne ya nwaanyị sidịrị ọnwụ kwọrọ ya n’ụgbọala gawa idebanye aha ya na chọọchị Katọlik. Mgbe ha na-aga, ụzọ kpọchiri, ha alaghachi. Nwanne ya nwaanyị ahụ gwara ya na ha ga-agaghachi ọzọ echi ya. N’echi ya, nwaanyị a adaa ọrịa. Ọ bụ n’ehihie ụbọchị ahụ ka ya na ndị ọsụ ụzọ ahụ hụrụ. Ọ mụwala Baịbụl ọzọ, na-aga ọmụmụ ihe ma na-agwa ụmụ ya na ụmụ ụmụ ya ka ha na Ndịàmà Jehova na-amụ Baịbụl.